Ankaraobato : nahazo lisea vaovao – Depeche TARATRA
Accueil/Social/Ankaraobato : nahazo lisea vaovao
Ankaraobato : nahazo lisea vaovao
Nitia Raveloson Sissie 14 septembre 2021
Mbola tsy ampy ny isan’ny mpampianatra raikitra ao amin’ny Lisea Ankadilalampotsy Kaominina Ankaraobato raha toa ka efa andalam-pahavitana kosa ny efitranon’ny lisea izay vao naorina nanomboka ny volana mey ary hovitaina amin’ity volana septambra ity. Mandray mpianatra manomboka amin’ity taom-pianarana 2021-2022 ny sekoly. Ny serie L sy S aloha no ho hita ao amin’ity lisea ity hatreto.
Handray ankizy 104 ny ao amin’ny kilasy faharoa ary 30 ny ao amin’ny kilasy voalohany. Raha ny tokony ho izy dia ny voka-panadinana no andraisana ireo ankizy ireo raha ny fanazavana nentin’ny Ben’ny Tanànan’ Ankaraobato, RAMAMENOSOA Njato. Tanjona ny hanalana fahasahiranan’ny Ray aman-dReny sy ny mpianatra izay voatery mandeha 7 kilometatra isan’andro mamonjy sekoly. Voatery mankeny Ampefiloha, Mandrimena ary Iavoloha izy ireo.
Lisea voalohany eto amin’ny kaominina ity naorina ity. Ahitana efitra 6 mahazaka mpianatra 52 ny trano fianarana. Mitentina 72 .000 euro ny fotodrafitrasa. Izao no tanteraka dia noho ny fiaraha-miasan’ny Kaominina tamin’ny Masoivohon’i Japana.
Nitia Raveloson Sissie
PACT: 6 districts de la région Boeny bénéficieront du projet
Fametrahana ny “Centre de Traitement des Boues et de Vidange”: ho 10% ny fangerena an-kalamanjana ny taona 2023
Recrutement de 3 400 sortants des CRINFP
Atsimo Andrefana : 1,4% no vita vakisiny miaro amin’ny Covid-19
GIZ : 1.650.000 euro ho an’ny Tantsaha mpamokatra miisa 3.200
Solidarité Syndicale de Madagascar : tsy mifanaraka amin’ny vidim-piainana intsony ny karaman’ny mpiasa
“Caravane du sud 2”: Vary 120 taonina no niainga tao Taolagnaro
31 Aogositra: Andro afrikanina natokana ho an’ny fitsaboana nentim-paharazana